03/01/2017 | La dépêche de MadagascarLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarArchives	Archives journalières: Minisiteran’ny Fahasalamana: Hopitaly lehibe 10 sy toeram-pitsaboana 90 no hatsangana	03/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Foto-drafitrasa lehibe 100 no hapetraky ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ity taona 2017 ity. Hopitalim-panjakana ny 10 amin’izany _Ho fararanon’asa ity taona 2017 ity. Izany no fanamarihana voaray avy amin’Andriamanarivo Mamy Lalatiana, minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, tamin’ny faran’ny herinandro teo, raha nitatitra ireo bainga kasaina havadika amin’ity taona vaovao ity izy. Tahaka ny tamin’ny herin-taona dia voalaza fa…
TOETRY NY ANDRO: Orana tsy voajanahary no nisantatra ny taona	03/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Tontosa tamin’ny alahady teo ny hetsika fandatsahana orana nataon’ireo teknisianina misahana ny toetry ny andro eny Ampandrianomby. Omaly ihany dia nody ventiny ny rano nantsakaina satria, nilatsaka ny orana noforonina voalohany tamin’ity taona 2017 ity. Ny tsy fahampian-tosik’ireo raho-mainty hamorona hamandoana ho tonga orana, hoy Randrianarison Rivo, lehiben’ny sampandraharaha misahana ny famantarana ny mety ho…
Ho taonan’ny fahombiazana	03/01/2017	Rédigé par:	Vonjy RADASIMALALA
Laisser un commentaire	Arahabaina nahatratra ny taona vaovao ! Izany no feo heno isaky ny làlana amin’izao taona vaovao izao. Any an-tsaina any kosa anefa ny tsirairay, samy manotany tena ihany hoe “raha vaovao ny taona moa izany dia maninona?” Mety tsy dia hampiova inona tokoa ho an’ny tsy manana tanjona, saingy taona hanaovana dingana vaovao indray ho…